Deep Vein Thrombosis (သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Deep Vein Thrombosis (သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း)
Deep Vein Thrombosis (သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ သွေးပြန် ကြော တွင်းတွင် သွေးများခဲသော အခါဖြစ်သော ရောဂါတစ် မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ထိခိုက်သော သွေးပြန်ကြောများသည် များသောအားဖြင့် ခြေထောက်ကြွက်သားမျာတွင် နက်ရှိုင်း စွာ ရှိပါသည်။ အခြားနေရာများတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သွေး ခဲသည် သွေးစီးဆင်းမှုကို နှေးစေပါသည်။ ဖြစ်သောနေရာတွင် ရောင် ခြင်း၊ နီခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းတို့ဖြစ်လာပါသည်။ သွေးခဲသည် အ ဆုတ်ဆီသို့ ရောက်ရှိပါက အဆုတ်တွင် သွေးကြောပိတ်ခြင်း ဖြစ်ပွားပြီး ပြင်းထန်သော အသက်ရှူမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
Deep Vein Thrombosis (သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်းသည် မည်သူမဆိုတွင် ဖြစ် နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အသက် ၆၀ကျော် လူများတွင် အများ ဆုံး ဖြစ်ပွားပါသည်။ ထို့အပြင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု မရှိ သူများ၊ ကိုယ်ဝန်သည် များနှင့် သွေးရောဂါရှိသူ များသည် သွေးခဲခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမြင့်ပါသည်။ အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချ ခြင်းဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ် နိုင်ပါ သည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန် နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Deep Vein Thrombosis (သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါဖြစ်သောသူများ၏ တစ်ဝက်တွင်သာ ရောဂါလက္ခ ဏာများ ပေါ်ပါသည်။ ထို ရောဂါလက္ခဏာများသည် ခြေ ထောက်တွင် ဖြစ်ပွားပါသည်။ ၎င်းတို့တွင်-
ခြေထောက်သို့မဟုတ် ခြေထောက်ရှိ သွေးပြန်ကြော တစ်လျှောက်တွင် ရောင်ရမ်းခြင်း
မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း ပြုလုပ်သည့်အ ခါတွင်သာ ခံစားရသော ခြေထောက်တွင် နာကျင် ခြင်း
ခြေထောက်၏ ရောင်သော နာကျင်သော နေရာတွင် ပူနွေးလာခြင်း
ခြေထောက်အရေပြား နီရဲခြင်း အရောင်ပြောင်းလဲ ခြင်း
အချို့လူများသည် ရောဂါလက္ခဏာများ မပြမချင်း သွေး ပြန်ကြော သွေးခဲကို သတိမထားမိပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများ မှာ-
အသက်ရှူမြန်ခြင်း နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း
အထက်တွင် ဖော်ပြ မထားသော အခြားလက္ခဏာ များလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုများရှိနေသည်ဟု စိုးရိမ်မိပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
Deep Vein Thrombosis (သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အောက်ပါတို့ရှိပါက သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရှိ သွေးပြန်ကြောများ တွင် သွေးခဲများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
သွေးပြန်ကြော၏ အတွင်းနံရံသည် ပျက်စီးပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဓါတုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဇီဝဆိုင်ရာ အချက်များသည် သွေးပြန်ကြောများကို ထိခိုက်စေ ပါသည်။ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခြင်း၊ ရောင် ရမ်းခြင်း၊ ကိုယ်ခံအား တုံ့ပြန်မှု စသည်တို့ ပါဝင်ပါ သည်။
သွေးစီးမှု နှေးကွေးလေးလံပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုမရှိ ခြင်းသည် သွေးစီးဆင်းမှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။ ခွဲ စိတ်ကုသမှုပြီးနောက်တွင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖျားနာပြီး အိပ်ယာပေါ်တွင် အချိန်ကြာစွာ လဲနေရခြင်း၊ အချိန် ကြာစွာ ခရီးသွားနေရခြင်း ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
သွေးသည် ပုံမှန်ထက် ထူခြင်း သွေးခဲလွယ်ခြင်း။ မျိုးရိုးလိုက်သော အချို့ရောဂါများ ( factor V Leiden စသော) သည် သွေးခဲခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့် စေပါသည်။ ဟော်မုန်းကုထုံး သို့မဟုတ် မွေးဖွားမှု ကို ထိန်းချုပ်သော ဆေးများသည် သွေးခဲနိုင်ချေကို မြင့် စေပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Deep Vein Thrombosis (သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွေးပြန်ကြော သွေးခဲခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အချက်များစွာ ရှိပါသည်။ အချက်များများရှိလေ ရောဂါပြင်း ထန်နိုင်လေဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်စေသော အချက်များ မှာ-
မျိုးရိုးလိုက်သော သွေးခဲမှုရောဂါ။ အချို့လူများသည် လွယ်ကူစွာ သွေးခဲစေနိုင်သော ရောဂါမျိုးရိုး ရှိပါ သည်။ ထိုရောဂါသည် အခြား ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်စေ သော အချက်များနှင့် မပေါင်းပါက ပြဿနာ မဖြစ် စေနိုင်ပါ။
အိပ်ယာတွင် ကြာရှည်စွာ နေခြင်း။ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဆေးရုံကြာရှည်စွာ တက်ရခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ခြေ ထောက်သည် ကြာရှည်စွာ မလှုပ်ဘဲနေပါက ခြေသ လုံး ကြွက်သားများသည် သွေးလည်ပတ်အောင် မ ညစ်နိုင်တော့ဘဲ သွေးခဲနိုင်ချေကို မြင့်စေပါသည်။
ခွဲစိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရခြင်း။ သွေးပြန်ကြော များကို ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် သွေးခဲနိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
ကိုယ်ဝန်။ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းသည် တင်ပဆုံနှင့် ခြေ ထောက်ရှိ သွေးပြန်ကြောများတွင် ဖိအားများစေ သည်။ အထူးသဖြင့် မျိုးရိုးလိုက်သော သွေးခဲရောဂါ ရှိသော အမျိုးသမီးများသည် အန္တရာယ်ပိုရှိသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးခဲခြင်းသည် ကလေးမွေးပြီး ခြောက်ပတ်ကျော်အထိ အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သည်။
မွေးဖွားမှု ထိန်းချုပ်ဆေးများ သို့မဟုတ် ဟော်မုန်း အစားထိုး ကုထုံးများသည် သွေးခဲနိုင်ချေကို မြင့်စေ ပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်း သို့မဟုတ် အဝလွန်ခြင်း။ ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်းသည် တင်ပဆုံနှင့် ခြေ ထောက်ရှိ သွေးပြန်ကြောများတွင် ဖိအားများစေ သည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် သွေးခဲနိုင်ချေကိုမြင့်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို ထိ ခိုက်စေသည်။
ကင်ဆာ။ အချို့ကင်ဆာများသည် သွေးခဲမှုကိုဖြစ် စေသော ပစ္စည်းများ ပမာဏကိုများစေသည်။ အချို့ ကင်ဆာ ကုသမှုများသည်လည်း သွေးခဲနိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
နှလုံးရောဂါ။ နှလုံးရောဂါရှိသူများသည် သွေးပြန် ကြောသွေးခဲခြင်း နှင့် အဆုတ်တွင်သွေးခဲပိတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်ပါသည်။ နှလုံးရောဂါရှိသူများသည် နှလုံးနှင့် အဆုတ်လုပ်ငန်းတွင် ကန့်သတ်မှုများရှိ သော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာများသည် ပို၍ သိသာ ပါသည်။
အူရောင်ရောဂါ။ Crohn’s disease သို့မဟုတ် အနာ ဖြစ်စေသော အူရောင်ခြင်း စသော အူရောဂါများ သည် သွေးခဲနိုင်ချေကို မြင့်စေပါသည်။
အဆုတ်တွင် သွေးခဲပိတ်သော မိသားစု သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် မှတ်တမ်းရှိခြင်း။ သင် သို့မဟုတ် သင့် မိ သားစုတွင်းမှ တစ်ယောက်တွင် သွေးခဲခြင်း၊ သွေးခဲ ပိတ်ခြင်း ဖြစ်ဖူးပါက သင့်တွင်ဖြစ်ပွားရန် ပိုများပါ သည်။
အသက်။ အသက် ၆၀ကျော်တွင် သွေးခဲနိုင်ချေမြင့် ပါသည်။ သို့သော် မည်သည့်အရွယ်တွင် မဆို ဖြစ် နိုင်ပါသည်။
ကားမောင်းခြင်း လေယာဉ်စီးခြင်း ကဲ့သို့ အချိန်ကြာ စွာ ထိုင်ရခြင်း။ နာရီပေါင်းများစွာ ခြေထောက်ကို မ လှုပ်ဘဲထားပါက ခြေသလုံးကြွက်သားများသည် မညစ်နိုင်တော့ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ညစ်မှသာ သွေး လည်ပတ်ခြင်းကို ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခြေသလုံး ကြွက်သားများ အချိန်ကြာစွာ မလှုပ်ပါက သွေးခဲ များသည် ခြေထောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
Deep Vein Thrombosis (သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သွေးပြန်ကြော သွေးခဲခြင်း ကို အတည်ပြုရန် ဆရာဝန် သည် ရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်း မေးမြန်းပြီး စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ သွေးပြန်ကြော သွေးခဲခြင်းဟု သံသယ ရှိ ပါက ဆရာဝန်သည် အတည်ပြုရန် အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများ ကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
Sonogram (ultrasound)။ ရောင်နေသော ခြေ ထောက်သို့မဟုတ် အခြားနေရာကို ရိုက်ပြီး သွေးစီး မှုကို တိုင်းတာပါသည်။
သွေးစစ်ခြင်း (D-inner) သည် သွေးခဲပျော်သော အခါ ထွက်လာသော သွေးတွင်း ပစ္စည်းကို တိုင်းတာ ခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်း ပမာဏများနေပါက သင့်တွင် သွေးပြန်ကြော သွေးခဲခြင်း ရှိနေနိုင်သည်။
အချို့ရှားသော ကိစ္စများတွင် sonogram နှင့် သွေးစစ်ခြင်း တို့ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ပါက ဆရာဝန်သည် အထူးဓါတ် မှန်ရိုက်ခြင်း (venography) ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဆိုးဆေးကို သွေးပြန်ကြောတွင်း ထိုးသွင်းပြီး သွေးခဲသည် သွေးစီးကြောင်းကို ပိတ်နေသလား ကြည့်ရှုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Deep Vein Thrombosis (သွေးပြန်ကြော သွေးခဲပိတ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုသည် သွေးကျဲဆေး (heparin) ကိုချက်ချင်း ထိုး ပေးပြီး သွေးခဲဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပါသည်။ Heparin သည် သွေးကြောတွင်း ထိုးခြင်း သို့မဟုတ် အရေပြားအောက်ထိုး ခြင်း တို့ဖြင့် ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်က ဘယ်နည်းလမ်း သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ မည်။ ဆရာဝန်သည် သွေးခဲကို ကြီးခြင်းကို တားရန်၊ နောက်ထပ် သွေးခဲ များဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ရပ်ရန် သွေးကျဲဆေး (warfarin) ကိုသောက်ရန် ညွှန်ကြားပါမည်။ ရက်အနည်း ငယ်အထိ Heparin နှင့် Warfarin နှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ Warfarin သည် သွေးတွင်းတွင် လိုချင်သော ပမာဏ ရောက်ပါက heparin ကိုရပ်ပြီး warfarin ကို ရောဂါ အခြေအနေကို မူတည်၍ များသောအားဖြင့် ၆လ သို့မဟုတ် ပို၍ကြာစွာ ဆက်သောက်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဘဝတစ် လျှောက်ကုသမှုလည်း လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ warfarin ဆေး ပမာဏ မှန်စေရန် သွေးစစ်ကြည့်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
Heparin မသောက်နိုင်ပါက သွေးခဲခြင်းကိုကုသရန် thrombin inhibitors များ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သွေးကျဲဆေးများ မသောက်နိုင်ပါက သို့မဟုတ် ထိုဆေး များဖြင့် အလုပ်မဖြစ်ပါက ဆရာဝန်သည် သွေးပြန်ကြော စစ်သည့်ကိရိယာ ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စစ်သည့် ကိရိယာ ကို vena cava ဟုခေါ်သော သွေးပြန်ကြောကြီးတွင် ထိုးသွင်းပါသည်။ ထိုစစ်သည့် ကိရိယာ သည် သွေးခဲများကို အဆုတ်သို့ မရောက် ခင် တားပေးပြီး အဆုတ်တွင်သွေးခဲပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ် ပေးပါသည်။ သို့သော်လည်း စစ်သည့် ကိရိယာသည် သွေးခဲအသစ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးမပေးနိုင်ပါ။
ဆရာဝန်သည် ခြေထောက်ရောင်ခြင်းကို သက်သာစေရန် အထူးပြုလုပ်ထားသော ခြေအိတ်ရှည်ဝတ်ရန် အကြံပြု နိုင်ပါ သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် သွေးပြန်ကြော သွေးခဲခြင်းကို ကုသရာတွင် ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် သွေးပြန်ကြော သွေးခဲခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
သွေးကျဲမှု ပမာဏကို စောင့်ကြည့်ရန် ဆရာဝန် ညွှန် ကြားသည့်အတိုင်း သွေးစစ်ပါ။ ဆေးသောက်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်ချရန်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရန် နှင့် ပတ်သက်သော ဆရာဝန်၏ အကြံပေးချက်များကို လိုက်နာပါ။ ရောဂါပြန်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အတွက်ဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာစွာ ထိုင်နေပြီးပါက လမ်းလျှောက်ခြင်း ခြေ ထောက် အကြောဆန့်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ။
ခရီးရှည်မသွားခင် ဆရာဝန်အား အကြောင်းကြားပါ။ warfarin မသောက်တော့ပါက aspirin သောက်ရန် ဆရာဝန်အား မေးပါ။
ထိုင်နေစဉ် လဲလျောင်းနေစဉ် ခြေထောက်ကို မြင့် သောနေရာတွင် ထားပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများ ရှိပါက သင့်အတွက် သင့်တော်သော အဖြေရှာဖွေနိုင်ရန် ဆရာဝန် နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009). The Merck manual home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 433